ने.वि. संघका अध्यक्ष नैन सिंह महर जो आफ्नै कार्यकर्ताबाट आलोचित बने « News24 : Premium News Channel
ने.वि. संघका अध्यक्ष नैन सिंह महर जो आफ्नै कार्यकर्ताबाट आलोचित बने
नेपालमा धेरै बिद्यार्थी संगठनहरु रहेको छ । त्यस भित्र नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल बिद्यार्थी संघको नाम अगाडी आउछ । यो संगठन पनि बेला र बखतमा विवादको कारण चर्चामा आउने गरेको छ । यति बेला यस्तै नया खबर बाहिर आएको छ । केहि समय अगाडी ललितपुर जिल्लामा अवस्थित कसमस इन्जिनेरीङ कलेजमा ने.वि संघ इकाई अधिवेशनको आयोजना भएको थियो । उक्त अधिवेशनलाई निस्पक्ष रुपमा गराउन ने.वि संघ केन्द्रबाट एक जना प्रतिनिधि समेत खटाईएको थियो । अधिवेशन त भयो तर उक्त प्रतिनिधिले धाधली गरेको भन्दै कुनै नतिजा बिनानै अधिवेशन स्थगित भयो ।
तर अहिले आएर त्यसै अधिवेशनको बारेमा नया खबर बाहिर आएको छ । ने.वि संघ केन्द्रिय अध्यक्ष नैन सिंह महरले आपसी हिसाबले स्थगित भएको अधिवेशनको छलफल नै नगरी सोइच्छाले आफ्नो मान्छेलाई पत्र दिएका छन् । यहि बिषय यति बेला विवादमा परेको छ । जिल्लामा कुनै पनि किसिमको छलफल नगरी यहाँ सम्मकी निर्वाचन प्रतिनिधिलाई समेत कुनै जानकारी नदिएर आपसी हिसाबले कसैलाई पत्र दिनुले यति बेला ने.वि संघ केन्द्रिय अध्यक्ष नैन सिंह महरको आलोचना संगै बिरोध भईरहेको छ ।
यहि विवादको बिषयमा ललितपुर जिल्लाबाट निर्वाचन जिल्ला प्रतिनिधि ने.वि संघ जिल्ला उपाध्यक्ष निरज महर्जन र निर्वाचन अधिकृत मोहन राज जोशी सहितको दस्तखत सहितको बिज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको छ । बिज्ञप्तिमा केन्द्रिय अध्यक्ष नैन सिंह महरको यस किसिमको कदम प्रति कडा आलोचना गरिएको छ । अध्यक्ष नैन सिंह महरले नेपाल बिद्यार्थी संघलाई प्रा.ली बनाउन लागेको आरोप पनि उनि माथि लागेको छ । अध्यक्ष महरको यस कदमले यति बेला ठुलो विवाद उत्पन्न भएको र यसले ने.वि संघ भित्रै साथीभाई बीच फाटो लिएर आउने काम गरेको उनि माथि आरोप छ ।
यस्तै अध्यक्ष महरको लज्जास्पद निर्णय बिरुद्ध ने.वि संघ कसमस कलेज इकाई समितिले पनि बिज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बिज्ञप्तिमा समेत अध्यक्ष महर प्रति कडा आलोचना गरिएको छ । आफु अध्यक्ष भएको बेला अध्यक्षको अधिकारको दुरुप्रयोग गरेको भन्दै ने.वि संघ कसमस कलेज इकाई समिति उनि माथि कडा रुपमा उत्रिएको देखिन्छ । यस्तै अध्यक्ष महरको यस कदमले अब हुन गईरहेको चुनाबको बेला ने.वि संघको साथीहरुमा नै विवादको माहोल सृजना गरेको र यसबाट निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि ठुलो असर पर्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।